Mareykanka oo digniino culus soo saaray | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Mareykanka oo digniino culus soo saaray
Mareykanka(SONNA) Warkan ka soo baxay Xoghaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa looga digay dalalka dariska la ah Lubnaan inaysan colaad ka hurin Lubnaan, kadib markii xiisad ay ka dhalatay iscasilaadii ra’iisal wasaarihii Lubnaan, Sacad Alxariiri.
Xoghaya arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in maleeshiyaadka kooxaha hubeysan ee shisheeye aysan gudaha Lubnaan uga furneyn dowr faragalineed oo sharci ah, isaga oo hadalkaasi uga dan lahaa xulafada Lubnaan ee, iyo kooxda hubeysan ee Shiicada ah ee Xisbulaah.
Ra’iisal Wasaare Xariiri ayaa six un u dhalleeceeyay labada dhinac ee Koxda Xisbulaha iyo xulufada kale ee Lubnaan kaddib markii uu uga dhawaaqay inuu iscasilay Sacudi Carabiya.
Xisbulaah ayaa sheegeysa in Sucuudi Carabiya ay xirtay Mr Xariiri ayna ku qasabtay inuu iscasilo. Basle Mr Tillersio ayaa sheegay in loo xaqiijiyay in Mr Xariiri aan la xirin Marakankuna uu taagersan yahay dowlada madaxbanaan oo ah Lubnaan.
Antonio Guterras Xogahayana guud ee Qaramada Midoobay, ayaa ka digay colaad hor leh oo ka dhalata Lubnaan ay cawaaqib xun ka dhalan doonto.
Previous articleTaliyaha Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya oo 5000 oo dollar ugu deeqey Naafadda Martiine kujirta
Next articleTaliyaha C.X.D oo 5000 oo dollar ugu deeqey Naafada Martiine kujirta+Sawirro